डा. केसी किन बसे १३ औँ पटक अनशनमा ? यस्तो छ कारण – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
असोज २०, काठमाणडै । डा. गोविन्द केसीले पुनः अनशन सुरु गरेका छन् ।
माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेर केसीले १३ औं पटक अनशन सुरु गरेका हुन् । दसैंअघि १२ औं पटक अनशन थालेका डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी सदन सकिएको र दसैं पनि सुरु भएको भन्दै असोज ११ मा स्थगित गरेका थिए । बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीले १३ औं अनशन सुरु गरेका हुन् ।
माथेमा प्रवितेदन र डा. केसीले उठाएका मागविपरीत काठमाडांैमै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी संसदीय समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नै संसद्बाट समेत पारित गर्न खोजेसँगै उनले असोज ९ मा अनशन थालेका थिए । १३ औं अनशनमा पनि उनले माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस र विगतमा सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।
१२ औं अनशन स्थगनसँगै डा. केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माग पूरा नगरे १९ गतेदेखि अनशन थाल्ने जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा देउवाले अन्य दलसँग कुरा गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र विधेयक पारित गर्न तयार भएपछि डा. केसीले अनशन नरोकेका हुन् ।
डा. केसीको मागविपरीत एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने प्रयासमा प्रमुख दल लागेका छन् । माओवादी नेता एवं पूर्व्शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले १९ वा २२ गते बस्ने संसद्बाट विधेयक पारित हुने र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।
११ औं अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नै काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डा. केसीसँग सहमति भएको थियो । तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिले मर्म्विपरीत टुंगो लगाइसकेको छ । माओवादी र एमाले सञ्चालक रहेको प्रस्तावित कलेजलाई सम्बन्धन लिन सहज हुनेगरी समितिले विधेयक पारित गर्दा नै माथेमा प्रतिवेदनविपरीत हुनेगरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेज खोल्न नपाइने र एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाउँने सुझावसमेत हटाइएको छ ।
डा. केसीले मेडिकल माफियाको मिलेमतोमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी शुल्क निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय खारेजी र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले बढी शुल्क तोकेर अर्बौंको चलखेल गरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु र डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् । सरकारले एक वर्षअघि नै उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । उनले आइओमबाट खोसिएको त्रिविको अधिकारसमेत फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित भएर पनि एमबिबिएस पठनपाठन सुरु नभएको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनअध्यापन सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गर्न, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको कामसमेत तत्काल अगाडि डा. केसीले माग गरेका छन् ।
अन्य मागमा सरकार सहमत भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने सत्तारूढ दल माओवादीसमेत प्रतिपक्ष एमालेकै लाइनमा उभिएर विधेयक पारित गर्न लागेपछि डा.केसी बढी सशंकित बनेका छन् । एमाले र माओवादीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म अन्य विधेयक अगाडि बढ्न रोकेपछि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमेत यही रूपमा चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छन् ।
एघारौं अनशन जारी रहँदै साउन २५ मा यी विवादित सर्त राखेरै विधेयक समितिअन्तर्गतको कार्यदलबाट पारित भएको थियो । सोही दिन समितिकी सभापति रञ्जु झाले समितिबाट जबरजस्ती पारित गर्ने तयारी गरेपछि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विधेयक रोकिएको थियो । २६ गते प्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।
विधेयकलाई समितिबाट पूर्ण संसद्मा पेस गर्ने समयमा पारित भएविपरीत गरिएपछि कांग्रेसका सासंदहरुले निवेदन दिएर कार्यव्यवस्थामा विधेयक रोकिएको थियो । तर सासंदहरुको उजुरी फिर्ता नहुँदै झालगायत एमाले र माओवादीका धनीराम पौडेललगायतको दबाबमा कार्यव्यवस्थाले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर दर्ता भए पनि पारित गर्ने सूचीमा नराखिएको विधेयक असोज ९ गते पारित गर्ने तयारी भएसँगै डा. केसीले अनशन थालेका थिए ।
ग्लोबल टिचर प्राइजका लागि आवेदन दिने दिन ३ दिन मात्रै बाँकी